About US – PPRD
၂။ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –
(က) ၁၉၆၃ ခုနှစ် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန – ပြည်သူ့ရေနံလုပ်ငန်း
(ခ) ၁၉၇၀ ခုနှစ် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန – မြန်မာ့ရေနံကော်ပိုရေးရှင်း
ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား မြန်မာ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းအနေဖြင့် ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေရာမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုပြဌာန်းခဲ့သည့် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား စစ်ဆေး ကြီးကြပ်ခြင်း၊ ၎င်းတို့ လိုက်နာရမည့် လုပ်ထုံလုပ်နည်း၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများ ရေးဆွဲသတ်မှတ်ခြင်းတို့ကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
Tous les cookies qui peuvent ne pas être particulièrement nécessaires au fonctionnement du site Web et sont utilisés spécifiquement pour collecter des données personnelles des utilisateurs via des analyses, des publicités et d’autres contenus intégrés sont qualifiés de cookies non nécessaires. Il est obligatoire d’obtenir le consentement de l’utilisateur avant d’exécuter ces cookies sur votre site Web. www.viagrasansordonnancefr.com A Quand Le Cialis Generique.